တတိယအကြိမ်မြောက် နွေရာသီအခြေခံပန်းချီသင်တန်း နေပြည်တော်၌ ဖွင့်လှစ် - Yangon Media Group
နေပြည် တော် ပျဉ်းမနားမြို့ ပန်းချီပန်းပုအစည်းအရုံးမှကြီးမှူး၍ တတိယအကြိမ်မြောက် နွေရာသီအခြေခံပန်းချီသင်တန်း (အခမဲ့ပညာဒါန)ကို မတ် ၁၈ ရက်မှ ဧပြီ ၄ ရက်အထိ ပျဉ်းမနားမြို့ အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Grade 1? 2? Kg Grade 1၊ 2၊ 3၊4ကျောင်း စာသင်ရိုးတွေမှာ ပန်းချီပညာသင်ရိုးစာအုပ်တွေမှာ ပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီ။ ရှေ့နှစ်ဆိုရင် ခြောက် တန်းကနေ စသင်တော့မှာမို့ ကျောင်းသင်ရိုး ပန်းချီပညာဘာသာကို အထောက်အကူဖြစ်အောင် အခု ပန်းချီအခြေခံ သင်တန်းကို ဖွင့်တာပါ။ အခြား အခြားသောဘာ သာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ ပထဝီနဲ့ သမိုင်းဘာသာရပ်တွေကို အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ဒီပန်းချီသင်တန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျောင်းသင် ပညာရေးကို လုံးဝအထောက်အကူ ပြုဖို့နဲ့ အလှအပကို မြတ်နိုးစိတ်နဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာကိုနှစ်သက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ပန်းချီပန်းပု အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်လွင်မြင့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါသင်တန်းတွင် Level 1၊ 2၊3ခွဲခြားထားပြီး Level 1 တွင် ပန်းချီသင်တန်း လုံးဝတက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိသူ Kg မှ Grade2၊ Grade2တွင် Grade2မှ ၈ (အလယ်တန်းအဆင့် သုံးတန်းမှ ရှစ်တန်းအထိ)၊ Grade3တွင် ပန်းချီသင်တန်းတက်ပြီးသည့် ကလေး များအား လက်တွေ့သရုပ်ပြရေးဆွဲ ခြင်းကို သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပြင်ပ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများလည်း တက်ရောက်ကြကာ စုစုပေါင်း ၂ဝ၉ ဦး တက်ရောက် ကြောင်း သိရသည်။